हजार सपनाहरुको माया लागेर आउँछ बाँच्ने रहर जस्तो फेरी भएर आँउछ
मैले बाँचेको परिवेश सानो तेती थिएन परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन अल्झे कहीँ त के भो बाटो भुलेको छैन-२ भाँचीसकेको विश्वाश फेरी भएर आउँछ
मेरा ती स्वरहरुलाई थुन्नु तेती भएन सबले भुलेको जस्तो भुल्नु पनि भएन खुशीनै हो कि क्या हो मनमा भएर आँउछ-२ छिनमा लहर अनेकौ मनमा उठेर आउँछ
मलाई मन पर्ने गीतहरुमध्यको एक गीत हो यो। शब्द मन पर्नु भन्दा पहिले त गीत मन परेको भक्तराज आचार्यको स्वरको कारणले होला। पहिले त शब्दमा तेती ध्यान दिएको थिइन, आज सुन्दा सुन्दै लेख्न मन लाग्यो तेसैले लेखिहाले। बिशेष त केही छैन। सुनेका धेरै गीतमध्ये अलीकता आशाबादी गीत जस्तो लाग्छ। जीवनमा केही गर्न नसकेको, बाटोमा अल्झेको पिडा त छदैछ, तेसको बबजुद पनि हजारौ सपनाहरुलाई सम्झेर बाच्ने प्रेरणा त छ नि। असल काममा अगाडि बढ्न खोज्दा तिम्रो स्वरलाई दबाउन खोज्नेहरु पनि होलान, तीनलाई थुन्न खोज्नेहरु पनि होलान। तर असल काममा लाग्नेलाई र अगाडि बढ्नेलाई यसले केही असर गर्दैन। बरु यसले त हौसला र प्रेरणा पो मिल्छ त अघी बढ्नलाई।…
जिउँदै बोकेर आएको
तोते बोलीबाट शुरु भएर
कठीन यात्रा गर्दा पनि
बुझेरै पनि जीवन त जिउनै छ
अगाडि त बढ्नु नै छ
संघर्ष त गर्नु नै छ
अस्तित्वको रक्षा गर्नु नै छ
अन्तमा चाहिने के हो र
एक टुक्रा कपडा?
नाम कमाउने होडमा
दाम कमाउने होडमा
जीवनको धेरै मोडमा
गल्ती गर्न पछी पर्दैनन कोही
फर्केर हेर त पछाडि
त्यो तिमी जस्तै
तिम्रै पछी आईरहेछ
(कसैको मृत्‍युको खबर सुनेर लेखिएको हो यो। हुन त मेरो नजिकको ब्यक्ती होइन तर मृत्‍यु त मृत्‍यु हो नि। जीवन वास्तवमै के हो र? होडबाजीमा लाग्दा-लाग्दै, झिना-मसिना कुरामा अल्झिदै जाँदा मान्छेले मृत्‍युलाई बिर्सेंको हुन्छ। हुन त फेरी तेही मात्र सत्य हो भनेर बस्यो भने त जीवन अघी पनि त चल्दैन। हो अघी बढ्ने क्रममा काम गर्दाखेरी यो अन्तिम सत्यलाई ध्यानमा दियो भने अवश्य पनि जीवन राम्रैगरी अघी बढ्ला कि? )
जागिर शब्द कती राम्रो सुनिन्न, पहिले जा अनि गिर भनेजस्तो। नभन्दै उस्तै त छ जागिर। सबैको आ-आफ्नो अनुभव होलान हुनत। सरकारी जागिरको लागि यो अती मिल्ने शब्द हो, प्राइभेटमा त कहाँ त्यस्तो। गिर या नगिर त्यो तिम्रो रोजाइ तर दिएको काम राम्ररी गर, दाँया बाँया गर्ने होइन। जाउठ कस्तो सुनिन्थियो होला। गएर काम गरेपछी अगाडी पनि बढन सकियोस न।
हुन त जागिर जसले खान्छ तेसको अर्थ के हो भने त्यो मान्छे कि त जागिर खान वाध्य छ, आफ्नो दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न या उ सजिलो बाटोको खोजिमा छ। सजिलो यस अर्थमा कि जागिर(बिशेषगरी सरकारी) खाएपछी ढुक्क भयो जीवन। secure लाईफ भन्छौ नि हामी, तेस्तै। अचेल त जताततै आन्दोलनको मौसम छ प्राइभेटको पनि बाध्यता छ, जागिर खाएपछी ढुक्क। जागिर कसैले खोस्न सक्ने पनि होइन। तेसैले त हाकिमले अर्हाएको काम पियनले पनि मान्दैन यदी कुनै स्वार्थ छैन भने। जागिर अरुले खान सक्तैन। तर ठाउमा पर्‍यो भने त फेरी जागिर जाउठ पनि हुन्छ। ठाउँको अर्थ के भन्नुहोला। घुस खाने ठाउँलाई राम्रो ठाउँ भन्ने चलन छ नेपाली समाजमा। कोही भन्सारमा खर्दार थियो र उसले टन्न सम्पत्ति जोड्यो भने तेस्लाई घुस मान्दैन हाम्रो समाजल…
फर्केर आईज है....
म मदनदाइको पलेटी श्रंखला सुन्दैछु। उनलाई प्रश्न गरिन्छ, तपाईंको छोरा छोरी बिदेशमा छन, कस्तो लाग्छ तपाईंलाई? उनको जवाफले चित्त बुझ्छ। कानले खोज्छ, कानले पनि भेट्छ, आँखाले खोज्छ तेस्ले पनि भेट्छ, तर जब मनले खोज्छ, तब गर्हो हुन्छ। तेस्तै हो यो मनको कुरो बुझ्न गर्हो छ। अहिलेको नेपालको यो बाध्यता पनि होला, सबैले आ-आफ्नो सन्तानलाई यस्तै मनले खोज्दा खोज्दै पनि चित्त बुझाईरहनु परेको छ। हो भुगोलले हामीलाई अवश्य टाढा बनाएको होला तर यो मनको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ कहिले कही। हाम्रा आफन्तहरुलाई दु:ख परेको हुन्छ हामीलाई तेस्तै केही असजिलो महसुश हुन्छ। हाम्रो जहिले पनि उन्नती प्रगतिको कामना गर्छन् उनिहरु, तेही भएर त होला, जस्तो सुकै काठिन परिस्थितीमा पनि नेपालीहरु दु:ख दर्द भुलेर बचिरहेका छन।
हामी त मानव हौ, हामीलाई भुगोलले छेक्ला, रोक्ला; तर प्रकृतिलाई त कस्ले रोक्न सक्छ र। हामी प्रकृतिको माध्यम बाट त जोडीन सक्छौ नि। ए बहिरहेको हावा, यहाँबाट बहदै जा, मेरो श्वासको सुस्केरा लिएर जा। मेरो आराम बिरामको खबर लिएर जा। त यहाँबाट बहदै जा, जादा जादै तैले मेरो चाहने कसैलाई भेटिस भने यो मेरो खबर त…
साथीहो, म बिदेशमा छु
म बिदेशकै भाषा र भेशमा छु
म पैसा कमाउने रेशमा छु
म कहिलेकाही रिश र द्वेशमा छु
म सधै खुइलियको केशमा छु
र अहिले दशै छ
न यहाँको आकाशमा चङ्गा छ
न यहाँको सडकमा दङ्गा छ
यहाँको माटो मेरो होइन
यहाँ माटो कम जताततै बालुवा र गिटी छन
सडक-शहर जताततै राम्रा-राम्रा ठिटी छन
र अहिले दशै हो
यो रातो रङ,
असत्यमाथि सत्यको जीतको रङ हो
यो मालश्रीको गीतको रङ हो
यो हामी एक आपसको प्रीतको रङ हो
तेसैले हामी सबै दसैंको रङमा रमौ
सबैको निधारमा टिका र जमरा होस्
हात हातमा डिजिटल क्यामरा होस्
सबैको एक आपसमा मेल होस्
माया र पिरतिको भेल होस्